zava-baovao - Famolavolana
Alatsinainy 6 Septambra 2021
Ny Siramamy Ny fahazoana dite na fisotroana kafe dia tsy fanalefahana fotsiny ihany. Izy io dia fombafomba manara-maso sy fizarana. Ny fampidirana siramamy amin'ny kafe na diteo dia mora mora toy ny mitadidy ny Romanina Romana! Na mila siramamy iray na siramamy iray na roa na telo ianao dia mila misafidy ny iray amin'ireo isa telo vita amin'ny siramamy ary alaivo amin'ny zava-pisotro mafana na hatsiakao. Vahaolana iray ary ny tanjonao dia voavaha. Tsy misy sotro, tsy misy fandrefesana, mahazo izany tsotra.
Ny Trano Fidiovana Alika
Ny Trano Fidiovana Alika Ny PoLoo dia trano fidiovana mandeha ho azy manampy ireo alika hilamina amin'ny fandriam-pahalemana, na dia mafana be aza ny andro. Tamin'ny fahavaratra tamin'ny taona 2008, nandritra ny fialantsasatra andiany miaraka amin'ireo alika fianakaviana 3 Eliana Reggiori, tantsambo mahay dia namorona ny PoLoo. Miaraka amin'ny namany Adnan Al Maleh namorona zavatra izay tsy vitan'ny alika ny fiainana, fa hanatsara ihany koa ireo tompona antitra sy kilema ary tsy afaka hivoaka ny trano amin'ny fotoanan'ny ririnina. Izy io dia mandeha ho azy, hialana fofona ary mora ampiasaina, entina, manadio ary mety ho an'ny olona mipetraka ao anaty trano, ho an'ny tompona fiara sy ny sambo, hotely ary trano fandraisam-bahiny.
Asabotsy 4 Septambra 2021
Ny Tranom-Borona Noho ny fomba tsy miangatra ary ny tsy fisian'ny fifandraisana maharitra miaraka amin'ny natiora, miaina amin'ny endrika fahasimbana sy tsy fahafaham-po anatiny ny olona iray, izay tsy mamela azy hanana fiainana feno. Azo amboarina amin'ny alàlan'ny fanitarana ny sisintanin'ny fomba fijery sy ny fananana traikefa vaovao amin'ny fifaneraserana maha-olombelona-olombelona. Fa maninona ny vorona? Ny fihiran'izy ireo dia misy fiantraikany amin'ny fahasalamana ara-tsaina olombelona, ny vorona koa dia miaro ny tontolo iainana amin'ny bibikely bibikely. Ny tetikasa Domik Ptashki dia fotoana iray hananganana toe-tsaina mahasoa sy manandrana ny anjara toeran'ny ornithologist amin'ny alàlan'ny fijerena sy ny fikarakarana vorona.
Karazam-Biby Fiompy Biby Fiompy
Zoma 3 Septambra 2021
Karazam-Biby Fiompy Biby Fiompy Ny tanjon'ny mpamolavola dia ny famahana ireo olana amin'ny fanabeazana alika ao amin'ny tokantrano 1 olona. Ny fikorontanan'ny biby voanjo sy ny olana ara-batana dia miorim-paka amin'ny faharetan'ny tsy fahaizan'ny mpikarakara. Noho ny fivelomany kely dia niara-niasa tamin'ny biby niaraka taminy ireo mpikarakara, ary niteraka olana ara-pahasalamana. Nahazo aingam-panahy avy amin'ny teboka fanaintainana, ny mpamorona dia tonga miaraka amin'ny robot fikarakarana izay 1. milalao sy mifandraika amin'ny biby miaraka amin'ny fikosoham-borona, 2. manadio ny vovoka sy ny crumb aorian'ny hetsika anatiny, ary 3. mandray fofona sy volo rehefa mandray ny biby miaraka aminy. fitsaharana.
Modèle Fanaka Farafara
Alakamisy 2 Septambra 2021
Modèle Fanaka Farafara Raha manana saka ianao dia mety manana roa amin'ireto olana telo ireto raha mifidy trano ho azy: tsy fisian'ny aesthetika, faharetana ary fampiononana. Fa ity modely tariby ity dia mamaha ireo olana ireo amin'ny alàlan'ny fampifangaroana lafin-javatra telo: 1) endrika famoronana minimal: ny fahatsorana endrika sy ny fiovaovan'ny lokony miloko; 2) Sariaka am-pirenehana: fako kitay (vovoka, ahodrano) dia arovana ho an'ny sakaizan'ny saka sy ny tompony; 3) Oniversite: ny mody dia natambatra, izay ahafahanao manangana trano fisarahana namboarina ao anaty tranonao.
Alarobia 1 Septambra 2021
Sezitetika Alika Tsy amboara dog ihany izany, Fembava alika miaraka amin'ny rojo vy azon-tratrahana. Frida dia mampiasa hoditra kalitao miaraka amin'ny varahina matevina. Rehefa mamolavola io sombin-javatra io izy dia mila mandinika fomba tsotra iray azo antoka hanakonana ny rojo raha ilay alika kosa manao ny rojo. Ny fehin-kibo koa dia tsy maintsy nanana fahatsapana haingo tsy nisy rojo. Amin'io famolavolana io, ny rojo vy voaaro, ny tompony dia afaka mandravaka ny alikany raha maniry.
Wuhan Pixel Box Cinema Ny Sinema Asabotsy 18 Septambra
Opx2 Fametrahana Optic Zoma 17 Septambra
Vivit Collection Ny Kavina Sy Peratra Alakamisy 16 Septambra
Ny Siramamy Ny Trano Fidiovana Alika Ny Tranom-Borona Karazam-Biby Fiompy Biby Fiompy Modèle Fanaka Farafara Sezitetika Alika